Naqshadeynta Farsamada - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax Tech waxay bixisaa noocyo badan oo adeegyo farsamaynta injineernimada ah. Waxaan u abuuri karnaa naqshad farsamo oo dhameystiran badeecadaada cusub, ama waxaan ku sameyn karnaa dib-u-habeyn iyo hagaajin ku sameynta naqshadaha makaanikada ee jira. Waxaan ku qancin karnaa baahiyahaaga naqshad farsamo koox injineero farsamo sare leh iyo naqshadeeyayaal khibrad ballaadhan u leh soosaarka cusub. Khibradeena injineernimada qandaraaska injineernimada waxaa ku jira noocyo kala duwan oo wax soo saar ah, oo ay ku jiraan alaabada macaamiisha, aaladaha caafimaadka, wax soo saarka warshadaha, alaabada isgaarsiinta, alaabada gaadiidka iyo alaabada kale.
Waxaan haynaa nidaamyo casri ah oo 3D CAD ah oo loogu talagalay naqshadeynta farsamada, iyo sidoo kale qalab / qalab kala duwan oo loogu talagalay falanqaynta farsamada iyo baaritaanka. Isku darka injineerada khibrada leh iyo aaladaha naqshadeynta waxay u ogolaaneysaa Fumax Tech inay kuu soo gudbiso naqshad farsamo oo loogu talagalay waxqabadka iyo soo saarista.
Qalab software caadi ah: Pro-E, Shaqooyin adag.
Qaabka faylka ： tallaabo
Nidaamkayaga horumarinta farsamada ayaa sida caadiga ah ku lug leh tallaabooyinka soo socda:
Waxaan si wadajir ah ula shaqeynaa macmiilkeena si aan u go'aamino shuruudaha farsamo ee sheyga ama nidaamka gaarka ah. Shuruudaha waxaa ka mid ah cabirka, astaamaha, howlgalka, waxqabadka, iyo adkeysiga.
2. Naqshadeynta Warshadaha (ID)
Muuqaalka dibedda iyo qaabka sheyga ayaa la qeexay, oo ay ku jiraan wixii badhano iyo bandhigyo ah. Talaabadani waxaa lagu sameeyaa si is barbar socda horumarinta qaab dhismeedka farsamada.
3. Farsamada dhismaha
Waxaan horumarineynaa qaabdhismeedka farsamada heerka sare ee badeecada. Tirada iyo nooca qaybaha makaanikada ayaa lagu qeexay, iyo sidoo kale isku xirnaanta looxyada Daabacan ee Daabacan iyo qeybaha kale ee badeecada.
4. Qaabeynta Mechanical CAD
Waxaan u abuureynaa naqshad farsamo oo faahfaahsan ee mid kasta oo ka mid ah shakhsiyaadka qaybaha farsamada ee sheyga ah. Qaab-dhismeedka 3D MCAD wuxuu isku-darayaa dhammaan qeybaha farsamada iyo sidoo kale hoosaadyada elektaroonigga ee sheyga.
5. Kulan nooc ah
Ka dib markaan dhammaystirno qaabka farsamada, qaybaha noocyada farsamada waa la been abuuray. Qaybaha waxay u oggolaanayaan xaqiijinta nashqadeynta farsamada, qeybahaasna waxaa lagu weheliyaa elektaroonigga si loo sameeyo noocyada shaqada ee sheyga. Waxaan ku siinnaa daabacaad 3D deg deg ah ama Muunado CNC sida ugu dhakhsaha badan 3 maalmood.
6. Imtixaan farsamo
Qaybaha makaanikada iyo noocyada shaqada ayaa la tijaabiyaa si loo xaqiijiyo inay buuxinayaan shuruudaha ku habboon. Tijaabada u hogaansanaanta wakaalada ayaa la sameeyaa.
7. Taageerada wax soo saarka
Ka dib markii naqshad farsamo si buuxda loo tijaabiyay, waxaan abuuri doonnaa naqshad farsamo oo loogu talagalay injineerada Fumax tooling / molding injineerada si loo abuuro caaryada, wax soo saar dheeri ah. Waxaan ku dhiseynaa qalab / caaryada guriga dhexdiisa.